ကချင်ဒေသ ငြိမ်းချမ်းရေး ပါဝင်ဆောင်ရွက်လိုဟု ၈၈ အဖွဲ့ ပြော | ဧရာဝတီ
လင်းသန့်| February 23, 2012 | Hits:494
0 | | ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများက ကချင်ပြည်နယ်တွင်း ခိုင်မာသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ပေါ်ထွန်းစေရန် ပေါင်းကူး ပံ့ပိုးပေးလိုကြောင်း ပြောကြားလိုက်သည်။
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့အနီး မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်းကြောင့် ရွှေ့ပြောင်း ခံခဲ့ရသည့် ဒေသခံပြည်သူများ၏ ကျေးဇူးတော် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ရန်ဖိတ်ကြား၍ သွားရောက်ကြသော ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများက ထိုသို့ ပြောကြားလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
တိုင်ရီ ဆန္ဒပြ အလုပ်သမားများ ဝါဏိဇ္ဇ အလုပ်သမားခုံရုံးသို့ တက်မည်
“တရားမျှတမှုကို ခြေရာ ကောက်ခြင်း” အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment khinn mg oo February 23, 2012 - 9:06 pm	If burma bloody army withdraw from kachin state is the best way to finish the war in kachin state now.
Reply	KHAING KYAW WIN February 23, 2012 - 11:11 pm	without equality, there is no way for peace in everywhere. if not , there is no way until end of the world. we are always brave to die for equality.
Reply	Maung Lwin February 23, 2012 - 11:25 pm	Welcome Brothers of Our 88 Student Leaders,
We must solve this problem with all of our original Brother of Ethnic group. Our people are sick and tired about misleading of Dishonest Generals. They real don’t want to solve this problem because they want to make that country really needed their Dirty Army. Until right now they’re still using dishonest way which can’t solve the whole problem of ethnic group. Also Nobody can’t predict of “Current Generals” ” What of their Future Plan”..Nobody know…
Reply	mayaw February 24, 2012 - 9:51 am	လော၂ဆည်းက ဒီအဆင်မရောက်သေဘူဉ ကချင်ပြောမယ် DKBA ကိုကြည့်ကြပါလို အနုးအညွန့်တေင်ပန်တယ် ကိုကိုကြီး
Reply	တုတ်ကြီး February 24, 2012 - 11:07 am	ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ… ၈၈ က ဒီလိုလုပ်ပေးမယ်ဆိုတာ အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်။ တယ်တော့ စစ်ဆိုတာ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်အတွက် မလိုလားအပ်တဲ့ ဆိုးကြိုးတွေကို သယ်ဆောင်နေတာပါ. .နောက်ဆုံးတော့ပြည်သူတွေပဲ ခံစားရတာပေါ့… ၀မ်းသာပါတယ်..၈၈ ရေ
Reply	Sann Myint February 24, 2012 - 11:19 am	နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံး တကယ် ငြိမ်းချမ်းရေးလိုချင်တယ်၊ တိုင်းပြည်တိုးတက်တာမြင်ချင်တယ်။ ပြည်သူတွေကို စာနာချင်တဲ့ စိတ်ရှိမယ်ဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းရေး မဝေးတော့ပါဘူး
Reply	May February 24, 2012 - 1:01 pm	This is the obvious character of good leaders. Don’t forget that we are always standing with you.
Reply	ct February 24, 2012 - 3:53 pm	တိုင်းရင်းသားအရေးဟာ ပြောသလောက် မလွယ်ပါဘူး ၈၈ ရေ သူတို့ပန်းတိုင်ဖက်ဒရယ်ဟာ
ေ၇ာနှောနေထိုင်တဲ့ တိုင်းရင်းသား ၁၃၅ မျိုးလုံးအတွက် အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး
Reply	Maung Maung February 24, 2012 - 4:16 pm	တကယ်တော့ စစ်တပ်နဲ့ ကေအိုင်အေ ဟာနီးရက်နဲ့ဝေးနေကြတာပါ။ မဝေးသင့်ပေမဲ့ အစိုးရမနိုင်တဲ့စစ်တပ်က ယုံကြည်ရန်ခက်ခဲတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပါပဲ။ မြန်မာပြည်တ၀ှမ်း တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်း အပစ်ရပ်ဒေသအားလုံးမှာ အစိုးရစစ်တပ်က လက်တွေ့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ၈၈ မျိုးဆက် အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ ရဲရဲတောက်ကမ်းလှမ်းချက်ကို လေးစားပေမဲ့ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ လက်မခံသင့်ပါ။ စစ်တပ်ကအပစ်ရပ် ကြိုးစားမှုဟာ အလစ်အငိုက်ရရှိရေး တစ်ခုသက်သက်ဖြစ်ပ်ါတယ်။ ထိုကြောင့် ကေအိုင်အေ ရပ်တည်ချက်မှန်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးညှိနှိုင်းမှုမရပဲ
Reply	smile February 24, 2012 - 5:02 pm	how can they do this job as they know nothing about the ethnic conflicts deeply?
even look now, they go to Kachin state with media/journalists/ASSK/NLD , look like personal advertisement/boosting show
Reply	John Thu Ya February 24, 2012 - 9:34 pm	Exactly!!! Khinn Mg Oo ,what you’ve said Absolutely right
Reply	minn February 26, 2012 - 9:14 pm	ယုတ်မာချင်တဲ.စိတ်က အခုထိမပျောက်သေးတော. မောင်မင်းတို.ကြားခံရင်လည်း ပြဲရုံဘဲရှိမယ်လို.ထင်တယ် သတိမလွတ်ကြစေနဲ.
Reply	စောနေကို March 5, 2012 - 12:06 pm	ဘာလဲ သူပုန်အားပေး လုပ်မလို့လား…?
Reply	Lailun January 11, 2013 - 8:48 am	88 Generation stands firm on which they believed since day one. The cried with us, they spent time in prison with us, they still sacrifice their lives with us. They understand the situation of the Union of Burma than others. 88 Generation is not flip-flop group but stands firm until the end.
Reply	လဆိုင်း January 11, 2013 - 7:52 pm	ကိုမင်းကိုနိုင် တို့ကိုတော့ အတုယူအားကျပါတယ်။ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ အစိုးရကိုပဲ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဖိအားမပေးပါနဲ့။ကေအိုင်အေကိုလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ဖို့ပြောဆို ဆန္ဒထုတ်ဖော် ဖိအားပေး ပါ။ဒါမှ မျှမျှတတဖြစ်မှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ပြသနာတွေကို ကချင်ပြည်နယ်က ပြည်သူလူထုလောက် ဘယ်သူမှမသိနိုင်လို့ပါ။